Sintomy ny fonosana fanavotana afo Bell 212 P3D 64-bit
Ny fonosana "Fire Rescue" dia noforonin'i Nicholas Mitchell. https://www.facebook.com/SimulatedAirTankerOperations
Ny Bell 212 dia helikoptera misy turbine kambana avy amin'ny mpamokatra amerikana Bell Aircraft Corporation. Sambany nanidina izy tamin'ny 1968. Andiany ny Bell UH-1 Iroquois. Amin'ny fikirakirana entana dia manana habe 6.23 m3 izy ary afaka mitondra entana 2268 kg.
Ity fonosana tena tsara ity dia misy modely fito sy atiny 19 ao anatin'izany ny Bell 212 avy any Alpes-Maritimes France (67). Ahitana koba virtoaly misy kabine feno sy tontonana 2D amin'ny antsipiriany ihany koa. Ny refy rehetra tsy mifanaraka amin'ny Prepar3D v4 + dia nosoloina gauge mifanentana.
Fanovana nataon'i Rikoooo:
- Fanitsiana ny mason'ny rotor lehibe tsy dia misy dikany amin'ny sidina (manjary manjavozavo ny motera ankehitriny)
- Fanoloana ny refy tsy mifanaraka
- Fanesorana ireo seza any aoriana amin'ny fijerin'ny cockpit virtoaly (hifandray amin'ny fomba fijery ivelany)
- Fanitsiana ny toeran'ny rotor manohitra ny mpivady amin'ny maodely Bambi
- Jiro raikitra sy fakan-tsary miodina
- Fikandrana tsy mangarahara raikitra
- Fanampin'ny vokatra taratra ivelany
- Nanamboatra olana mirehitra an-damosina ao ambadiky ny cockpit virtoaly
- Varavarana aoriana: Shift + E
- Varavarana mpanamory / mpiara-mpanamory: Shift + E + 2
- Snorkel / Bambi Bucket Manitatra / Mihemotra: Tailhook Key
- Fakan-tsary Flir Flir: Fakan-tsarimihetsika Axis X & Y Keys Ctrl + F1 / F2 / F3 / F4
- Famotsorana rano: Key i
Afaka mahita fiasa bebe kokoa ianao ao amin'ilay rakitra "Aircraft Accessories Readme.txt"
Orona Radome Bambi Bucket
SAR FLIR / Hoist / Bambi Bucket
Fanehoana livery 19:
(3) Helikoptera Wildcat (Aostralia & Kanada)
(1) Helikoptera TAF (Aostralia)
(1) Kestrel Aviation (Aostralia)
(1) McDermott Aviation (Aostralia)
(2) Kal Afo (Etazonia) (Fiksi)
(2) Rogers Helicopters (Etazonia)
(1) Sampana mpamono afo ao San Diego (Etazonia)
(1) Divizionan'ny ala any Nevada (Etazonia)
(1) Ventura County Sheriff (Etazonia)
(1) Sheriff County San Bernardino (Etazonia)
(1) Fikarohana sy famonjena ny SAR (Etazonia) (Fiksi)
(1) Kachina Aviation (Etazonia)
Format teratany Prepar3D v4 endrika
Modely voalohany nataon'i Jordan Moore sy George Arana. Niova ho P3D teratany avy amin'i Nicholas Mitchell "Scorch00" sy George Arana "euroastar350" Package nataon'i Nicholas Mitchell. Fanamboarana maro nataon'i Rikoooo